UMthethwa uzongenelela odabeni lwekhilikithi
Stuart Hess | October 15, 2020
UNGQONGQOSHE wezeMidlalo, uNathi Mthethwa, “uzongenelela” ekuxazululeni udaba lokuphatha kwiCricket South Africa (CSA) ngaphandle uma imnikeza izizathu zokuthi angakwenzi lokhu.
UMthethwa unikeze iCSA umnqamulajuqu ka-Okthoba 27 ukuthi imtshele ukuthi kungani kungamele asebenzise ilungelo lakhe lokungenelela ezindabeni zayo. Kuze kufike lolu suku olubekiwe akukho okunye ukuxhumana okuzobakhona phakathi kwehhovisi lakhe neCSA.
Sekuphele izinyanga kunomdonsiswano phakathi kwakhe, iCSA, ikomiti lezemidlalo ePhalamende neSouth African Sports Confederation and Olympic Committee (SASCOC).
Ezokuphatha kwiCSA zihlakazekile selokhu kwamiswa isikhulu esiphezulu uThabang Moroe ngoDisemba odlule. ICSA ibe seyiqala uphenyo nokho oseluyibhidlize lwayiqeda.
UMthethwa uzamile ukungayingeni eyokuphathwa kweCSA, wanikeza amandla iSASCOC ukuthi isize ixazulule izinkinga ezikhona. Kodwa lokho kubonakala kungasebenzi, yingakho esezimisele ukusebenzisa umthetho weNational Sport and Recreation esigabeni sokuxazululwa kwamacala ukuze angenelele.
Isigaba 13 salo mthetho siyamvumela uMthethwa ukuthi acele uMengameli Ramaphosa ukuthi asungule ikhomishini ezophenya uma kuwukuthi yonke imizamo isihlulekile.
UMthethwa uhlangane neCSA ngoMsombuluko wagcizelela ukuthi uyazeseka zonke izinyathelo ezisathathwe yiSASCOC, okuhlanganisa ukusungula ithimba elizophenya iCSA, nokuthi unobhala uWelsh Gaza nesikhulu esiphezulu esibambile, uKugandrie Governder, bashenxe.
“Emuva kokucubungula lokhu ebesixoxa ngakho, sengifike lapho ngibona ukuthi asikho isidingo sokubuye ngithintane neCSA,” kusho uMthethwa.
Uthe usayizisile ne-ICC ngezinhlelo zakhe zokungenelela. I-ICC inomethetho othi ingali­hlawulisa ibhodi lenhlangano noma imise izwe emidlalweni yangaphandle uma uhulumeni ephatha ikhilikithi.
“Konke sekulele ezandleni zenu CSA,” kuvala isitatimende sikaMthethwa.